'Rehefa afaka herintaona sy tapany tsy nisy ovy, tonga ny fotoana hihaonana indray' - Potatoes News
Rehefa afaka iray taona sy tapany tsy nisy hetsika ovy dia tonga ny fotoana hihaonana indray. Mpamboly ovy XNUMX no nanararaotra, taorian'ny fisoratana anarana talohan'ny fisoratana anarana, mba hiady hevitra momba ny ovy, hifanakalo vaovao momba ny tsenan'ny ovy ary hanao resaka kely indray.
Ny fampisehoana Europlant Variety voalohany ao amin'ny Gut Schirnau, eo afovoan'i Schleswig Holstein eo amin'ny lakandranon'i KielEckhard Simon Cultivation Consultant ao amin'ny EUROPLANT Pflanzenzucht Ltd:
"Tao Gut Schirnau niaraka tamin'ny fianakavian'i Fedder izahay dia nahita toerana tsara hanaovana andro saha ho an'ireo mpamboly ovy ao Schleswig-Holstein."
Ulf Hofferbert Consulting Manager ao amin'ny EUROPLANT Pflanzenzucht Ltd:
“Tsy ratsy ny vintana mety hisian'ny vidiny marim-pototra amin'ny vanim-potoana ho avy.”
Amin'ny faran'ny vanim-potoanan'ny ovy dia mbola ambony lavitra noho ny tamin'ny taon-dasa ny vidiny. Tsy fahatokisana momba ny toetrandro, ny voly kely ary ny fihenan'ny velaran-tany Germany ary koa ny Eoropa Andrefana dia manome fanantenana ho an'ny optimista ho an'ny taona tsaratsara kokoa noho ny taona 2020. Vonona amin'ny ravina voninkazo, karazana ovy 13 no azo aseho amin'ny lafiny tsara indrindra tamin'io hariva io.
Mety ho an'ny tsiro Alemana Avaratra, mavo lalina, mahandro matanjaka ary mora voadio, dia naneho ny tenany i Glorietta. Corinna, izay mety indrindra amin'ny fanasana sy ny fonosana, dia azo ampiasaina ho karazana fanarahan-dia miaraka amin'ny endrika milamina ary hoditra tonga lafatra sy mazava ary malama.
Corinna Potato Variety amin'ny famelabelarana isan-karazany ao SchleswigRaha maina sy mafana ny fahavaratra dia mihabetsaka hatrany koa ny avaratra, ny karazany toy ny Berninab dia mahaliana, satria tsy dia misy dikany loatra amin'ny hafanana sy ny fihenan'ny haintany ary mavo ny lokony, hentitra amin'ny fandrahoana sakafo ary manitra amin'ny tsiro.
Tsy lazaina intsony fa ny karazany maoderina dia manana fahaiza-mandray azota ambony, ka ny habetsaky ny zezika dia azo ahena be nefa mitazona ny vokatra sy ny kalitao tsara.
Antony iray manapa-kevitra ihany koa ny fanoherana tena tsara ireo otrikaretina ovy lehibe indrindra. Ohatra, ny ovy karmelina Karelia, izay mety amin'ny toerana rehetra, dia mahatohitra mafy ny nematodes kista Rostochiensis sy Pallida.
Ho an'ireo mpanjifa izay maniry ny hihinana sakafo gliosida ambany dia misy ny karazany Montana. Izy io dia manana votoatin'ny gliosida lehibe kokoa rehefa mitombo araka ny tokony ho izy ary, raha ny valin'ny laboratoara dia manamafy an'io atiny ambany io dia azo tendrena ho ovy "karbaona ambany".
Ny karazana Leyla, Belana, Laura ary Allians, izay miorina mafy eo amin'ny tsena, dia teo ihany koa, mazava ho azy. Ny tombony sy ny fatiantoka entin'izy ireo dia noresahina, nifanakalo ireo torohevitra sy tolo-kevitra momba ny fambolena.
Fampahalalana momba ireo karazana ovy isan-karazany ao Schleswig
Tags: zava-mitrangahetsika ovy
UTZ dia mamoaka CHIPPS PATRIOTIKA hanohana ireo mpikamban'ny serivisy miaramila
Frisianina lafo vidy any Pakistan